Shuruudaha isticmaalka - Bibliotek Huddinge
In la deynsado waa bilaash.
Kaarka maktabka waa bilaash.
Haddii aad dooneysid kaarka maktabka waa qasab adiga inaa na tusid maktabka kaarkaada aqoonsiga.
Haddii ay da’daadu ka hoosayso 18 jir waxaad u baahan tahay inay dadka adiga kaa mas’uulka ahi waraaqaha ay kuu saxiixaan. Haddii ay da’daadu tahay 16 jir oo aad haysato aqoonsi adiga kuu gaar ah markaa uma baahnid inay waraaqaha kuu saxiixaan dadka adiga kaa mas’uulka ahi.
Adiga baa mas’uulka ah wixii dhammaan lagu deynsado kaarka.
Waalidka baa mas’uul ka ah carruurtooda wixii ey deynsadan-
Wakhtiga deynta waa caadiyan afar isbuuc, laakin waxaa jiro xaalado qaas.
Adiga waxaa dib u deynsankarta labo jeer, laakin waxaa jiro xaalado qaas.
Haddii buuga saf loogu jiro wakhtiga deynta waa labo isbuuc.
Adiga baa mas’uul ka ah in deynta wakhtigeeda lagu soo celiyo.
Haddii buug lala soo habsaamo waa qasab in adiga bixisid qarash.
Carruurta ka yar 18 sano ma bixinaayaan qarash.
Haddii aadan buuga soo celin maktabka wuxuu kuu soo diri warqada qarash bixinta oo buugas.
Haddii buug soo dhaawacmo inta adiga deyn ahaan u haysatid waa qasab in adiga magdhab bixisid.
Adiga deynta waxaa ku soo celin karta dhammaan maktabyada Huddinge kana ad dooneysid.
Isticmaalida warbixinta shaqsiga
Anaga waxaa u baahanahay inaa keedino iyo isticmaalno warbixintaada, tusaale ahaan magacaada, lambarkaada dhallashada iyo ciwaankaada siduu maktabka hoowshooda u fulinkaran. Warbixintaada waa laga marman marka adiga lagaaga suubin konto maktabka.
Anaga waxaa ku dhaqmeynaa sharciga dhowrida warbixinta shaqsiga iyo ilaalinta xoriyada shaqsiga. Sharciga suurtagalin inaa isticmaalikarno warbixintaada waa Qeynuunka dowlada[Regeringsformen] qudubka 14, safka 2, iyo sharciga nidaamka maktabyada.
Warbixintaada waan keeydin ilaa inta adiga isticmaaleysid maktabyada oo Huddinge. Warbixintaada waa la masaxaya haddii aadan isticmaalin adeega maktabka muddo ka badan 3 sano.
Carruurta waa muddo gaari 5 sano haddii eysan isticmaalin adeega maktabka.
Sidaa kugu adeegikarno anaga mar mar waxaan ku qasbanahay inaa warbixintaada la qeybsano shirkade kale oo noo adeegi anaga. Warbixintaada ma u gudbineyno qof, urur ama wadan ka baxsan midoowga yurub[EU], oo ku shaqo leheen.
Marka aad na tusisid kaarka aqoonsiga waxaa xaq u yeelan:
in warbixin ka heshid warbixinta aan kaa hayno. Warbixintaas adiga waxaa heli ayaado qoraal ah.
warbixintaada in la masaxikaro 30 maalmood gudaheeda haddii aad naga dalbatid. Haddii aan masaxeyno waa qasab in dhammaan deymaha soo wada celisid iyo wixii qarash deyn soo wada bixisid.
naga codsatid inaa nusqaamino isticmaalida warbixintaada.
Telefoonka: 08-535 305 00 ama
Warbixinta shaqsiga waxaa mas’uul ka ah Guddiga hidaha iyo dhaqanka oo Huddinge.
Adiga waxaa wakiilka difaacida warbixinta kala xiriirikarta dataskyddsombud@huddinge.se.
Haddii aad dacwo ka tahay sida aan u isticmaalno warbixintaada adiga waxaa xaq u leedahay inaa la xiriirikartid Hey’adda kormeerida isticmaalida warbixintada shaqsiyada (Integritetsskyddsmyndigheten).